अबदेखी यी स्मार्टफोनमा फेसबुक र इन्स्टाग्राम बन्द हुने, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अबदेखी यी स्मार्टफोनमा फेसबुक र इन्स्टाग्राम बन्द हुने
डिसी नेपाल , २३ चैत्र २०७५
एजेन्सी। केही समयपछि विन्डोज फोनमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम तथा मेसेन्जर चल्नेछैनन् । यदि तपाइँसग पनि विन्डोज फोन छ भने मे महिनाबाट त्यसमा सोसल मिडिया सपोर्ट उपलब्ध हुनेछैन । यद्यपि थर्ड पार्टी एप वा वेबको प्रयोग गरी विन्डोज फोन प्रयोगकर्ताले सोसल मिडियाको प्रयोग भने गर्न सक्नेछन् ।
विन्डोज स्मार्टफोनको उत्पादन बन्द भैसकेको छ र माइक्रोसफ्टले पनि आफ्ना स्मार्टफोन लञ्च गर्न छाडिसकेको छ । पूराना विन्डोज फोनमा ह्वाट्सएपको सपोर्ट पहिलेबाटै बन्द भइसकेको छ र अब सबै खालका विन्डोज फोनमै ह्वाट्सएप सपोर्ट बन्द हुने अनुमान गरिएको छ।माइक्रोसफ्टका अनुसार आगामी डिसेम्बरबाट विन्डोज फोनका लागि सेक्योरिटी अपडेट पनि उपलब्ध हुनेछैन । अर्थात् डिसेम्बरपछि विन्डोज फोनको प्रयोग गर्दा भाइरस आक्रमणको खतरा हुनेछ ।
हालै सोसल साइट रेडिटमा एकजना प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्रामको एउटा सन्देशको स्किृनसट पोष्ट गरेका छन् । जसमा निकट भविष्यमै विन्डोज फोनमा इन्स्टाग्राम उपलब्ध नहुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ३० अप्रिलदेखि विन्डोज फोनमा इन्स्टाग्राम उपलब्ध हुनेछैन, यद्यपि वेब ब्राउजरबाट भने इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
विन्डोज फोनको अन्त्य २०१७ देखि नै भएको हो । चर्चित एप डेभलपर्सहरुले पनि विन्डोज फोनमा एप सपोर्ट पनि बन्द गरिसकेका छन् । अब विन्डोज फोनमा एप सपोर्ट बन्द गर्ने पालो फेसबुकको आएको छ । अहिलेपनि माइक्रोसफ्ट स्टोरमा फेसबुक, मेसेन्जर तथा इन्स्टाग्राम सबैभन्दा चर्चित एपको रुपमा रहेका छन् ।